စစ်ဒနီက ၂၀၂၀ နှစ်သစ်ကူး ကြိုဆိုကြသူများ – The Blog of Aung
အမှတ်တယ ဓါတ်ပုံ ရိုက်ကြသည်…
အင်္ကျီမှာ ရေးထားတာကတော့ Just do it. လူပုံကတော့ Can’t do it.
မြန်မာလို ဆိုရင်တော့ ဦးရွှေရိုးလို ပွဲဆော်တဲ့ သူမျိုးပေါ့…
ည ၁၂ နာရီပွဲ အတွက် ညနေခင်း ကတည်းကစောင့် ရတာဆိုတော့ စိတ်ရှည် လက်ရှည်
နေကပူ လူကကျပ် ဒီကြားထဲမှာ အကြည်ဆိုက်နေသူက ရှိသေးတယ်
လူတွေ ဝိုင်းရံလျှက် အဖော်မပါ တစ်ယောက်တည်း
လူတွေကြားထဲ ဆေးလိပ်မသောက်ရလို့ ညစ်နေလား မသိပါ
လူအများ အလယ် မိုးတိုး မတ်တတ်
ဘာတွေ သဘောကျစရာများ တွေ့လို့ လဲမသိ
သူလေးကလဲ အိုက်တင် အပြည့်နဲ့
ပွဲဆော်တွေကလဲ သူတို့ကို အာရုံစိုက်စေဖို့ ကို့ယို့ကားယား လုပ်ပြရ
ည သန်းခေါင်ပွဲကို နေ့လည်ထဲက လာစောင့်နေသူတွေနဲ့ ဖျော်ဖြေရေး
ဇာတ်စင်ရှေ့လည်း စတိုင်ထုတ် ဓါတ်ပုံရိုက်ကြ
သူတို့လဲ ပရိတ်သတ်ထဲက တစုံတွဲ
ဆရာကြီးလဲ လူတွေကြားမှာ လာကြည့်တယ်
ဒီလို အနေအထားနဲ့ ဆယ်လ်ဖီ ရိုက်မယ်ဆို ပိုလှမလားလို့
ကောင်းကင်ပေါ်မှာ ဟယ်လီကော်ပတာ ပျံနေတာကို အောက်ကနေ ဖုန်းနဲ့ လိုက်ရိုက်နေသေး
မြန်မာပြည်မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ ငယ်ငယ်က ရည်းစားဟောင်း တစ်ယောက်နဲ့ ချွတ်စွတ် တူလွန်းလို့
အမှိုက်ပုံဘေးမှာလဲ လူတွေ ပြည့်ကျပ်
လုံခြုံရေး အရ မေးမြန်း စစ်ဆေး ခံနိုင်ရမယ်
နေရာတွေ ဦးထားပြီး နေပူအောက်မှာ ညသန်းခေါင်ပွဲအတွက် စောင့်ဆိုင်းနေကြ
ဗိုက်ဆာရင်တော့ အပြင်ထွက်ဝယ် ကိုယ့်နေရာကိုယ် အထုတ်နဲ့ ပြန်သယ်…
ဟားဘား တံတားကြီး ပတ်ချာလည် လူတွေ အပြည့်အကျပ်
ထိုင်လိုက် ထလိုက် ဒီလိုဘဲ မီးပန်းလွှတ်မဲ့ အချိန်ကို စောင့်နေကြ
ဒီနှစ်ယောက်ကို ဘယ်သူက လက်ပိုက် မတ်တတ်ရပ်နေဖို့ ဒဏ်ပေးထားလဲ မသိပါ
Author ပင်တိုင်စာရေးသူPosted on January 2, 2020 January 2, 2020 Format GalleryCategories ဓါတ်ပုံမှတ်စုများ, အလည်အပတ်Tags ပွဲတော်
Previous Previous post: မြန်မာစကား ပြောတတ်တဲ့ စစ်ဒနီက ဆေးရုံ
Next Next post: စစ်ဒနီ ၂၀၂၀ နှစ်သစ်ကူး မီးရှူးမီးပန်း